पप गायक जस्टिन र हेलीले गरे सुटुक्क विवाह ! - pnpkhabar.com
You are at:Home»हलिवुड/बलिवुड»पप गायक जस्टिन र हेलीले गरे सुटुक्क विवाह !
पप गायक जस्टिन र हेलीले गरे सुटुक्क विवाह !
By मनिषा थापा on ३० भाद्र २०७५, शनिबार ०६:०१ हलिवुड/बलिवुड
पिएनपिखबर : पप सिंगर जस्टिन बीबर र उनकी प्रेमिका मोडल तथा गायिका हेली बाल्डविन विहिबार न्यूयर्कमा म्यारिज लाइसेंस कोर्टहाउसको बाहिर देखिए। सुत्रको अनुसार दुबैले रजिस्टर्ड म्यारिज गरेका छन्। तर यो खबर साँचो नहुन पनि सक्छ । किनभने जस्टिन र हेलीले अर्को वर्ष मात्रै विवाह गर्ने योजना बनाएका थिए।
कोर्टहाउसमा सहभागी भएका मानिसहरुको अनुसार जस्टिन निकै भावुक थिए र भावुक हुँदै हेलीलाई भन्दै थिए – म तिमीसँग विवाह गर्न अब पर्खिन सक्दिन।’ कोहिले भने जस्टिनले कोर्टलाई एक जजलाई धन्यबाद गरिरहेको देखेका थिए।
कोर्टमा उपस्तिथी भएका कसैले भने यी जोडी देश बाहिर जाने हल्ला सुनेका थिए। जस्टिनको नातेदारका अनुसार वेडिंग प्लानर हायर पनि भई सकेको छ। जस्टिन र हेलीले छुट्टि विताउने क्रममा गत जुलाई ७ मा सुटुक्क इन्केजमेंट गरेका थिए। अब भने विवाह पनि सुटुक्क गरेको हल्ला छ। हेर्नुहोस भिडियो :